hoggaamiyiye Al-Shabaab ah isaga iyo xaaskiisa oo lagu Diley duqeyn cirka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA hoggaamiyiye Al-Shabaab ah isaga iyo xaaskiisa oo lagu Diley duqeyn cirka
hoggaamiyiye Al-Shabaab ah isaga iyo xaaskiisa oo lagu Diley duqeyn cirka
Mareykanka ayaa Talaadadii sheegay inay dileen hoggaamiyihii Al-Shabaab ee xiriirka la lahaa weerarkii Manda Bay.
Taliska Mareykanka ee Afrika (Africom) wuxuu sheegay in argagixiso, oo aysan magacaabin, lagu dilay isaga iyo xaaskiisa, oo sidoo kale xubin caan ah ka ahaa Al-Shabaab, duqeyn cirka ah Sabtidii.
Weerar cirka ah, oo laga sameeyay isuduwidda dawladda Soomaaliya, ayaa lagu soo warramey in uu ku dhacay Saakow, oo qiyaastii 320 Km galbeedka kaga beegan Muqdisho.
“Labada argagixiso waxaa loo aqoonsaday hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Shabaab, kaas oo mas’uul ka ahaa qorsheynta iyo hagida howlaha argagixisada ee xadka Kenya, oo ay ku jiraan weerarkii ugu dambeeyay ee Manda Bay, iyo xaaskiisa, oo sidoo kale xubin firfircoon ka ahaa Al. -Shabaab ayaa mas’uul ka ah fududeynta howlo badan oo argaggixiso, ”Africom ayaa lagu yiri war ay soo saartay.
Madaxa Africom General Stephen Townsend ayaa sheegay in weerarka cirka ah uu yahay mid soo afjaraya dadaalada ciidamada ay ku raadinayaan sidii ay ula socon lahaayeen kuwii ka dambeeyay weerarkii 5-tii Janaayo.
Kuwa ku dhintay weerarkii Manda Bay waxaa loo aqoonsaday inay yihiin khabiiro ciidamada Mareykanka ah oo la yiraahdo Henry Mayfield Jr iyo qandaraaslayaasha Mareykanka Dustin Harrison iyo Bruce Triplett.